Archive du 20171018
Pastera Mailhol “Notambazana 5 miliara Ar aho mba tsy ho kandida”
Tambatambazan’ny fanjakana HVM tsy hirotsaka hofidiana ho Filoham-pirenena i Pastera Mailhol satria atahoran’ny fitondrana mafy, raha ny fanambarana nataony omaly.
Hery Rajaonarimampianina Nila vonjy tamin’ny Papa François
Niteraka adihevitra na teo anivon’ny fiarahamonina na tany anaty etamazaoro politika isan-karazany tany ny antony tsy maintsy nandehanan’ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina tany Roma Italia nanatrika ilay fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny sakafo ny 16 oktobra lasa teo.
Honoré Rakotomanana Efa mitanisa tantara sisa
Na malaza aza ny resaka mivoaka fa hoesorina tsy ho filohan’ny antenimierandoholona i Honoré Rakotomanana, dia fandokadokafana ny fitondram-panjakana HVM no tena nivoitra tao anatin’ny kabariny nandritra lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa omaly.
Rivo Rakotovao Atosika ho filohan’ny Antenimierandoholona
Nesorina tsy ho minisi-panjakana eo anivon’ny fiadidian’ny Repoblika misahana ny fiompiana sy ny fambolena intsony i Rivo Rakotovao, araka ny didim-panjakana novakian’ny Jeneraly Ralala Roger, sekretera jeneralin’ny fiadidian’ny Repoblika teny Iavoloha omaly.
Jean Max Rakotomamonjy « Asio adihevitra mazava ny fanovana lalàmpanorenana »
Niakatra 4,1% ny harinkarena faobe na teo aza ireo sedra nolalovan’ny firenena, toy ny rivo-doza. 5,1% izany ny taona 2018 raha mitombo ny fampiroboroana fambolena, hoy ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy nandritra ny kabariny tamin’ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa teny Tsimbazaza omaly.
Loholona Lylison Mbola misitraka hatrany ny tombontsoany
Fivoriana ara-potoana faha-4 teo anivon’ny antenimierandoholona tsy natrehin’ny loholona Lylison René de Roland ny nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly.
Mpanakorontana ny asa fanaovan-gazety Nampitandrina ny minisitry ny serasera
Ny vadina mpanao gazety dia tsy mpanao gazety, hoy ny minisitry ny fifandraisana, Harry Laurent Rahajason na Rolly Mercia, omaly raha naneho hevitra tetsy Tsimbazaza manoloana ny fisiana vadina mpanao gazety iray izay nolazainy fa tato ho ato dia nanao fihetsika sy teny manomboka manakorontana ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety eto amintsika.
Mahavoky Besarety Razana roa no natsingevan’ny rano
Olona roa sahady izao no maty natsingevan’ny rano maloto tao amin’ny fokontany Mahavoky Besarety vokatry ny firotsahan’ny rotsak’orana. Lehilahy ny iray tokony ho tamin’ny 8 ora maraina ary tsy nisy naka raha tsy efa folakandro.
Fifandonan’ny jiolahy sy zandary teny Ampitatafika 3 voasambotra, tratra ny basy poleta
Andian-jiolahy miisa 5 mitam-basy nikasa hanafika teny Ankadivory Ampitatafika no voasambotry ny zandary nanao fisafoana ny alakamisy alin’ny 12 oktobra tokony ho tamin’ny 12 ora. Efa tafahanika ny tambohon’ny tokantrano saika hokendreny, ary efa tany anaty efitrano aza no tsikaritry ny zandary, ka raikitra ny sakoroka.
Pavillon vaovao - Esplanade Analakely Ho vita amin’ny faran’ny volana novambra ny asa
Ny 90 %-n’ny asa fanamboarana ireo pavillon vaovao etsy amin’ny esplanade Analakely amin’izao fotoana no efa vita tanteraka. Mandalotra sy mandoko ireo efitrano miisa 33 sisa no asa hiantsorohan’ireo tompon’andraikitra misahana izany, araka ny vaovao azo teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.